Fitokonan’ny mpitsara : Hampikatso ny raharaham-pitsarana indray -
AccueilSongandinaFitokonan’ny mpitsara : Hampikatso ny raharaham-pitsarana indray
Fitokonan’ny mpitsara : Hampikatso ny raharaham-pitsarana indray
25/09/2017 admintriatra Songandina 0
Araka ny efa fantatra, hanatanteraka fitokonambe indray ireo mpitsara manomboka ny alarobia 27 septambra izao. Toa ny fanaony hatramin’izay, mitovy tamin’ny teo aloha ihany mantsy ny fangatahan’izy ireo sy ny mpiraki-draharaha.
Miendrika fanakorontanana, avy hatrany, ity fitokonan’ny mpitsara sy ny mpiraki-draharaha ity, satria hampikatso tanteraka ny raharaham-pitsarana indray izy ireo. Raha ny vaovao mantsy, hitokona tsy misy fitsaharany ny mpitsara sy ny mpiraki-draharahan’ny Fitsarana raha toa ka tsy mivaly ny fangatahan’izy ireo.
Tsiahivina anefa fa efa nifampidinika tamin’ny minisitra ny teo anivon’ny sendikan’ny mpitsara eto Madagasikara, na ny SMM, ary efa nampanantena ny Fitondrana tamin’ny alalan’ny minisitry ny Fitsarana fa handinika ireo fangatahan’ny mpitsara sy ny mpiraki-draharaha. Tsy nahandry tantana anefa ireto farany ka hiroso amin’io fitokonana io hatrany.
Hita ary tsapa, araka izany, fa ny hampikatso tanteraka ny raharaham-pitsarana no tanjon’izy ireo amin’izany. Fampijaliana vahoaka, avy hatrany, no azo andikana ity fihetsiky ny mpitsara sy ny mpiraki-draharaha ity. Hisavovona indray mantsy ny raharaham-pitsarana, ary tsy hisy fitsarana mandeha manomboka amin’io alarobia 27 septambra io.
Tsiahivina fa maro tamin’ireo manana raharaham-pitsarana no nimenomenona tamin’ny fampikatsoana ny Fitsarana tamin’ny fitokonan’ny mpitsara teo aloha teo. Nilaza izy ireo tamin’izany fa tsy ara-drariny ny fampikatsoana ny raharaham-pitsarana.
Marihina fa anisan’ny takian’ny mpitsara ny fahaleovantenan’ny Fitsarana, tsy hitsabahan’ny Fanjakana amin’ny asam-pitsarana, sns. Mipetraka ihany ny fanontaniana satria tsy misy ilàna ny minisiteran’ny Fitsarana izany, raha toa ka izay ilay fangatahana hanaovana fitokonambe. Fangatahana efa mihoa-pampana ity an’ny mpitsara ity, ary tsy ara-drariny satria efa fampijaliana vahoaka, ary tsy mijery ny maha-olona.
nam da sau sinh dans Mitsangana ry Malagasy-TSY NAHALOA VOLAN’OLONA
nam da sau sinh: With havin so much content and articles do you ever run into any issues of plagorism or copyright infringement?…